प्लस टु पछिको गन्तव्य-१
डेभलपमेन्ट स्टडिज्: समृद्धि र दिगो विकासको आधार सरकारीदेखि एनजीओ आईएनजीओसम्म जागिरको अवसर
दिनेश गौतम काठमाडौं, १३ साउन
कक्षा १२ पछि के पढ्ने ? कुन विषय पढेकाले के पढ्न पाउँछन् ? पढेपछि के बन्ने ? के कस्ता अवसर छन् ? विषय कसरी छनोट गर्ने ? नेपालमा के कस्ता विषयको पढाइ हुन्छ ? विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कुन विषय उपयुक्त हुन्छ ? यी र यस्तै प्रश्नलाई समेटेर कक्षा १२ उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई विषयको महत्त्व, सम्भावना, छनोट आदिका विषयमा सहयोग गर्न शिलापत्रले प्लस टु पछिको गन्तव्य स्तम्भ सुरु गरेको हो । विद्यार्थी र अभिभावकलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो स्तम्भ फलदायी हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । आज हामीले ब्याचलर इन डेभलपमेन्ट स्टडिज् (BDEVS)बारे सामग्री तयार पारेका छौं ।
के हो डेभलपमेन्ट स्टडिज् ?
देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक वातावरणलगायत हरेक क्षेत्रको विकास गर्न कुन अवधारणा अपनाउनु उचित हुन्छ भनेर खोज, अनुसन्धान गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सिकाइने शिक्षा डेभलपमेन्ट स्टडिज् हो ।
पृथ्वीमा उपलब्ध स्रोत साधनको विनाश नगरी कसरी विकास गर्ने ? दिगो विकास गर्न के गर्नुपर्छ ? पूर्वाधारको विकास मात्र विकास हो त ? स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग कसरी गर्ने ? विकासको कस्तो नमुना आवश्यक छ ? विश्वमा के कस्ता विकासका नमुना छन् ? के गर्दा मानिस आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन सक्छ ? देशलाई आर्थिक रुपमा कसरी समृद्ध बनाउने ? यस्तै जिज्ञासा र मानिसका आधारभूत आवश्यकताको विकासका विषयमा गहन अध्ययन गर्ने शिक्षा डेभलपमेन्ट स्टडिज् हो ।
डेभलपमेन्ट स्टडिज् स्नातक तहको चार वर्षे कोर्स हो । यसमा आठवटा सेमेस्टर हुन्छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत यो कोर्स पढाइ हुन्छ ।
ब्याचलर लेभलको कोर्स काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र मास्टर्स लेभलको कोर्स पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसमा पढाइन्छ ।
जुनसुकै विषयमा ११ र १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले यो विषय पढ्न पाउँछन् ।
कस्ता रुचि भएकाले पढ्ने ?
गाउँले परिवेश मन पराउने
समुदायसँग घुलमिल गर्न रुचि भएका
लेखन शैली भएका
विकासबारे जानकार राख्न खोज्ने
दिगो विकासको अवधारणासँग परिचित हुन
विश्वव्यापी रूपमा विकासको बहस र मोडेलबारे जानकारी राख्न
विकाससम्बन्धी अनुसन्धान र क्षमता बढाउन
समाजको विकासबारे सहजीकरण गर्न
मानव विकासको सहजीकरण गर्न
पूर्वाधार विकास गर्न
जनसंख्या व्यवस्थापन गर्न
वातावरणको संरक्षण र व्यवस्थापनबारे ज्ञान बढाउन
पढ्न पाइने क्याम्पस
नेसनल कलेज, धुम्बाराही, काठमाडौं
कामद कलेज, सुकेधारा, काठमाडौं
कलेज अफ डेभलपमेन्ट स्टडिज्
अनुसन्धान विधि र प्रक्रिया
चार वर्षमा आठ वटा सेमेस्टर अध्ययनका लागि कम्तीमा ६ लाख खर्च हुन्छ । क्याम्पसले दिने सेवा सुविधाका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
यति नै संख्यामा विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउँछन् भन्ने छैन । क्याम्पसले आफ्नो क्षमताअनुसार छात्रवृत्ति दिने गरेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छन् । नेसनल कलेजमा सार्क राष्ट्रका विद्यार्थीले पढ्न चाहेमा एक जनाका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
इन्टर्नसिप तथा भ्रमण
किताबी ज्ञानले मात्र सबै कुरा थाहा पाइँदैन त्यसैले प्राक्टिकलसमेत अनिवार्य गरिएको छ । आफूलाई रुचि भएको क्षेत्र रोजेर प्राक्टिकल वर्क गर्नुपर्ने हुन्छ ।
देशका दूरदराजमा पुगेर फिल्ड वर्क गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न संघ संस्थामा गएर आठौं सेमेस्टरमा इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने हुन्छ । ज्ञानको दायरा बढाउन नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ ।
लोक सेवामार्फत जुनसुकै सरकारी क्षेत्रमा
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था
सरकारी, गैरसरकारी अनुसन्धान तथा योजना तर्जुमा
कस्तो छ अवसर ?
डेभलपमेन्ट स्टडिज् पढेपछि विभिन्न संघ संस्थामा काम गर्ने अवसर पाइन्छ । कतिपयले पढ्दा पढ्दै पनि जागिर पाउँछन् । सुरुमा मासिक ३० देखि ५० हजारसम्म कमाउन सकिन्छ ।
विकाससम्बन्धी विभिन्न प्रोजेक्टमा अनुसन्धान गर्ने अवसर पाइन्छ । त्यस्ता कार्यक्रममा मासिक १ लाखभन्दा बढी कमाउन सकिन्छ । तर, यो व्यक्तिकाे भने दक्षता र अनुभवमा पनि भर पर्छ ।
विकाससम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्न विदेश जाने अवसर धेरै नै पाइन्छ । अन्य देशमा विकासका अवधारणा कस्ता छन् ? कसरी विकास भइरहेको छ ? यी विषयमा अनुसन्धान गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थामार्फत विदेश जान सकिन्छ ।
त्यस्तै, पढ्न जाने हो भने पनि भिसा लाग्ने सम्भावना धेरै रहन्छ । यो विषय पढेकाले जर्मन, क्यानडालगायतका देशका लागि सजिलै भिसा पाउँछन् ।
बजारमा माग कतिको छ ?
विकासबारे अनुसन्धानको काम संघ संस्थाले पनि गर्न थालेका छन् । ती संघ संस्थाले डेभलपमेन्ट स्टडिज् पढेका विद्यार्थीलाई नै अनुसन्धानमा खटाउने गरेका छन् ।
समृद्धि फाउन्डेसनका कार्यक्रम म्यानेजर मनोज्ञ शर्माले पछिल्लो समय डेभलपमेन्ट स्टडिज् पढेका विद्यार्थीलाई अनुसन्धानको काममा खटाउने गरेको बताए ।
‘विद्यार्थी इन्टर्नसिपका लागि आउनुहुन्छ,’ उनले भने, इन्टर्नसिपमा राम्रो गर्नेलाई रोजगारसमेत दिने गरेका छौं ।’
गुरुका नजरमा डेभलपमेन्ट स्टडिज्
माधवप्रसाद न्यौपानेः प्रधानाध्यापक, नेसनल कलेज
हामी दिगो विकास भन्छौं । तर, दिगो विकास कसरी गर्ने ? नेपालमा कस्तो मोडेलको विकास आवश्यक छ ? राजनीतिक अस्थिरताबाट लामो समय देश गुज्रियो । अब विकासको चरणमा देश बामे सर्दै छ ।
पूर्वाधारको विकास हुनु मात्र विकास होइन । नेपालको माटोअनुसारको विकास कसरी गर्ने ? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विकासका विषयमा अनुसन्धान गर्न डेभलपमेन्ट स्टडिज् आवश्यक छ ।
देशको विकास गर्न दक्ष जनशक्ति आजको आवश्यकता हो । त्यो जनशक्ति उत्पादन गर्न डेभलपमेन्ट स्टडिज्को सुरुवात गरेका हौं ।
विकाससम्बन्धी ज्ञान भएका जनशक्ति उत्पादन
गोविन्द कैनीः सहप्रधानाध्यापक, कामद कलेज
नेपालमा परिवेशअनुसारको विकास हुन सकेको छैन । विकासको मोडेल कस्तो बनाउने हो, अझै अन्योल छ । पश्चिमा देशले अपनाएको विकासको मोडेल नेपालका लागि सान्दर्भिक नहुन सक्छ ।
नेपाली हावापानीअनुसार कस्तो विकास आवश्यक छ ? त्यसको गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान गर्नु आजको आवश्यकता हो । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विकासका लगि अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति आवश्यक छ । विकासोन्मुख देशका लागि विकाससम्बन्धी ज्ञान भएका जनशक्ति आवश्यक भएकाले डेभलपमेन्ट स्टडिज्को महत्त्व धेरै छ ।
विकासको नयाँ आयाम खोजी गर्न
उज्ज्वल उपाध्यायः कार्यक्रम संयोजक, नेसनल कलेज
केही दशकयता पश्चिमा देशले अवलम्बन गरेको विकासको अवधारणा नेपाललगायत दक्षिण एसियाका देशले पनि अवलम्बन गरे । तर, नेपालमा पश्चिमा मोडेल सफल हुन सकेन ।
विविधता भएको देशमा सूक्ष्म विकास हुनुपर्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्था, कला संस्कृति र समुदायमा आधारित विकास प्रक्रिया हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन ।
कस्तो विकासको अवधारण अपनाउने भन्ने द्विविधाले नै विकासमा हामी पछि परेका छौं । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा विकासको नयाँ आयाम खोजी गर्न डेभलपमेन्ट स्टडिज् आवश्यक छ ।
विद्यार्थीका नजरमा डेभलपमेन्ट स्टडिज्
नाम र दाम कमाउन सकिन्छ
रञ्जु दर्शना, विवेकशील नेपाली दल
रञ्जु दर्शना विवेकशील नेपाली दलकी नेतृ हुन् । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखको उम्मेदवार भएपछि उनी चर्चाको शिखरमा पुगिन् ।
सानै उमेरमा यहाँसम्म आइपुग्न उनले धेरै संघर्ष र मेहनत गरेकी छन् । देशको विकासमा चासो राख्ने दर्शनालाई डेभलपमेन्ट स्टडिज्ले धेरै सहयोग गरेको छ । डेभलपमेन्ट स्टडिज्मा उनले ब्याचलर गरेकी छन् ।
‘देशको हरेक क्षेत्रमा कस्तो विकास भएको छ ? कस्तो विकास आवश्यक छ ? त्यो जान्न मन थियो त्यसैले यही विषय पढेकी हुँ,’ उनले भनिन् ।
‘कुनै पनि क्षेत्रमा एकै किसिमको विकास सम्भव छैन,’ उनले भनिन्, ‘कर्णालीमा चाहिने विकास र गण्डकीमा चाहिने विकास फरक हुन्छ ।’
ठाउँअनुसार विकासको मोडेल फरक हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । राजनीतिक जीवनमा पनि यो विषयले धेरै ज्ञान दिएको उनी बताउँछिन् ।
दीक्षा नकर्मी, अनुसन्धाता
दीक्षा नकर्मीले अर्थिक विकासबारे चासो राखिन् । विकाससम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने उनको रुचि थियो त्यसैले उनले कामद कलेजबाट डेभलपमेन्ट स्टडिज्मा ब्याचलर गरिन् ।
ब्याचलरपछि चार वर्ष उनले आर्थिक विकाससम्बन्धी अनुसन्धानमा काम गरिन् । अहिले उनी उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाउने सोचमा छिन् । चार वर्षको अनुसन्धान अनुभवबाट उनी उद्यम गर्ने सोचमा पुगेकी हुन् ।
‘रिसर्चबाट धेरै अनुभव बटुलेकी छु,’ उनी भन्छिन्, ‘अब उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाउने हो, आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिने हो ।’
उद्यमी बन्ने बाटो
सन्तोष पाण्डे, उद्यमी
११ र १२ मा विज्ञान विषय पढेका सन्तोषको सपना डाक्टर बन्ने थियो । जब उनले डेभलपमेन्ट स्टडिज्बारे जानकारी लिए । तब उनलाई यही विषयले तान्यो । उनले डेभलपमेन्ट स्टडिज् पढ्न सुरु गरे ।
ब्याचलर नसकिँदै उनले विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध भएर काम गरे । देश विदेशमा समेत जाने अवसर पाएका पाण्डे अहिले उद्यमी भएका छन् ।
ब्याचलर सकेपछि उनले अफरिङ ह्यापिनेस कम्पनी खोलेका छन् । उनले १०–१५ जनालाई रोजगारीसमेत दिएका छन् । पाण्डे सामाजिक काममा समेत सक्रिय छन् । सफलताको श्रेय उनी डेभलपमेन्ट स्टडिज्लाई दिन्छन् ।
विकास गतिशील छ । सन् २०३० सम्ममा गरिबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य छ । नेपाल सरकारले केही वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३३७ डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।
दिगो विकासका लागि गरिबीको जरो उन्मूलन गर्नु ठूलो चुनौती छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक वातावरणको सन्तुलन कायम गर्न पनि उत्तिकै चुनौती छ ।
भोकमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी र लैंगिक असमानता व्याप्त छन् । यस्तो अवस्थामा विकासको कस्तो मोडेल अपनाउने भन्ने द्वन्द्व छ । सामाजिक विभेद कायम छन् । सात वटा प्रदेशमा फरक फरक खालको विकास आवश्यक छ ।
अहिले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले योजना र अनुसन्धानको क्षेत्र समय खर्चेका छन् त्यसैले देशलाई दिगो विकासमा रूपान्तरण गर्न दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १४, २०७६, ०२:२५:००
एसईईमा विद्यालयको गम्भीर लापरबाही : विद्यार्थीलाई पूर्णांकभन्दा बढी नम्बर
भर्चुअल शैक्षिक परामर्श मेलाको स्टल बुकिङ खुला